About Us -. Bukit EXJIA CO WAXYAABAHA XAYAYSIINTA, LTD.
hayalka san banner
Dahaarka leh hayalka san Banner
Dahaaray hayalka san Banner
Mid ka mid ah Jidka Vision
Printable Maginetic baco
Printable milicsiga Qalabka
Is koollo vinylalkohol
Printable Butros Film
Warqad iyo dharka
advertising qabriga maryo
Waxyaabaha iska Ifto Yuuna
PCV Board xumbo
Bukit Exjia Advertising Waxyaabaha Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa magaalada Bukit, waxa aanu ku takhasusay qalabka advertising muddo ka badan 18 sano. Weelasha badan ayaa laga dhoofiyey in ka badan 42 dal, tayada deggan oo adag oo ku saleysan QC 24 saacadood, waxyaabaha aannu ka mid yihiin: banner hayalka san dahaaray, dahaarka banner hayalka san (oo ay ku jiraan frontlit, backlit, midabada double iyo blockout for hal dhinac ku daabacan), kulul blockout dahaaray iyo dahaarka leh labada dhinac ku daabacan. tarpaulin Hot dahaaray PCV, tarpaulin PCV dahaarka leh, mesh dahaarka leh. PCV film Printable, jidka hal aragti, is vinylalkohol koolo, vinylalkohol midabka, shiraac suuf. wax u milicsato, foomka guddiga PCV, warqad pp, qalabka xayawaanka, alaabta photo, dukumiintiyo film qabow, warqad sublimation kulul, wallpaper iyo wixii la mid ah.
Annagu waxaannu nahay gaar ah ee wax soo saarka iyo technology ee warshadaha this muddo 18 sano ah, Oo innaguna waxaynu nahay xirfadeed ee heerka warshadaha qaran iyo halbeegyada wax soo saarka.
waxaan leenahay ka badan 16 sano oo khibrad ah sale, waxaan ku siin karaa macmiil ah adeegga ugu wanaagsan.
waxaan heysanaa 24 saacadood QC duub kasta oo miisaanka, dhererka, width, dusha, saamayn daabacaadda, cabayn, qoraalka.
waxaan leenahay 6 nooc oo mashiinka dahaarka leh iyo dahaaray oo taariikheed, waxaan si deg deg ah ku siin karaan waqtiga dhalmada.
waxaan ku dhoofiyo 42 dal. (fahamka baahida suuqa ee dalalka kala duwan ayaa si buuxda), waxaynu og nahay baahida dalalka ugu saabsan alaabta iyo tayada.
EXJIA bixinaya fiiro gaar ah u sii jiritaanka tiknolojiyada iyo products.There shan shatiyada, oo ay ku jiraan afar patent muuqaalka, patent been abuurtay in EXJIA.
waxaan oo dhan aan awoodno si ay u bixiyaan adeegyada ugu fiican ee loogu talagalay macaamiisha our: alaabta tayo sare leh oo qiimo hoose, adeegga ugu fiican waqti bixinta deg deg ah.
qalabka daabacaadda: midabka cusub, xawaaraha dhakhso-qalajiyo of khad. suud for daabacaadda 2 ama 3 pass, dusha siman, joog, waayo, khad biyaha, khad bey'ada dareeraha, khad dareeraha, anti-fr, anti-UV, waxa ay gaari karaan heer EU. Max ilaa width in 5.10 m.
PCV tarpaulin: tarpaulin PCV la mesh xoog leh gudaha, siligga u fiican, laaca iyo xoog Amda, anti-fr, anti-UV. anti-fungus, anti-dubaalad, dusha qasac la kamuuqdo la looxa iyo pvdf, hadduu kartaa is-nadiif ah.
Max width kama tollayn dusha ilaa 5.10 m (201 '')
Hadafkeenu waa in samatabbixin qiimaha ka xoogbadan, macaamiisha iyo macaamiishooda our si joogto ah.
Bixinta midhaha ugu fiican, adeega ugu kaamil ah la qiimo yahay mid macquul ah waa mabda'a.
Waxaan mar walba ku adkaysanayaan on rogo oo maamulka "Tayada marka hore waa, Technology waa salaysan" ka.
Haddii aad xiisaynayso in waxyaabaha our, waxa kale oo aad soo gudbin kartaa macluumaadka iibka internetka, iyo waxaan la xiriiri doonaa in aad isla markiiba, annagu waan xajinnaa wada shaqeynteena aadka u daacad ah oo aad dooneyso wax walba oo aad kooxda yihiin oo dhan si fiican.
719 # Chengdian South Road, Bukit City, Zhejiang, Shiinaha
Global hayalka san Banner Market 2025 Cajiib ah ...
THE saxiixay TUS DPES Guangzhou 2019
DPES EXPO saxiixay Shiinaha 2019
Printable hayalka san Banner, vinylalkohol In Film Transfer , Wholesale Frontlit Banner Material, One-Jidka Vision vinylalkohol Film , Solar Light milicsiga baco, Quality hayalka san Banner ,